Bible Mu Nsɛm Yesu Nyan Awufo - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
ABEAWA a wuhu wɔ ha no adi mfe 12. Yesu kura ne nsam, na ne maame ne ne papa gyina ne nkyɛn. Wunim nea enti a wɔn ani agye saa? Ma yɛnhwɛ.
Abeawa no papa yɛ onipa titiriw a wɔfrɛ no Yairo. Da koro ne babea yaree, na wɔde no too mpa so. Nanso ne ho antɔ no. Ne yare no mu yɛɛ den. Ɛhaw Yairo ne ne yere kɛse, efisɛ na ɛte sɛ nea wɔn ba no bewu. Ɔyɛ wɔn babea koro pɛ. Enti Yairo kɔhwehwɛɛ Yesu. Na wate anwonwade a Yesu yɛ no ho asɛm.
Bere a Yairo huu Yesu no, na nnipa pii atwa ne ho ahyia. Nanso Yairo faa nnipa dɔm no mu kɔhwee Yesu nan ase. Ɔkae sɛ: ‘Me babea yare paa. Mesrɛ wo, bɛsa no yare ma me.’ Yesu kae sɛ ɔbɛkɔ.
Bere a wɔnam rekɔ no, dɔm no kɔɔ so kyeree no so. Mpofirim ara Yesu gyinae. Obisae sɛ: ‘Hena na ɔde ne nsa kaa me?’ Yesu tee nka sɛ ahoɔden bi afi no mu kɔ, enti na onim sɛ obi de ne nsa aka no. Nanso ɛyɛ hena? Ɛyɛ ɔbea bi a na wayare bɛyɛ mfe 12. Obesoo Yesu atade mu, na ne ho tɔɔ no!
Eyi maa Yairo ani gyei, efisɛ na otumi hu sɛnea ɛyɛ mmerɛw ma Yesu sɛ ɔbɛsa obi yare. Nanso ankyɛ na ɔbɔfo bi bae. Ɔka kyerɛɛ Yairo sɛ: ‘Nhaw Yesu bio. Wo babea no awu.’ Yesu tee eyi na ɔka kyerɛɛ Yairo sɛ: ‘Nni awerɛhow, obenya nkwa.’
Bere a wokoduu Yairo fie no, na nkurɔfo no resu, na wɔredi awerɛhow kɛse. Nanso Yesu kae sɛ: ‘Munnsu. Abofra no nwui. Wada ara kwa.’ Nanso wɔserewee na wodii Yesu ho fɛw, efisɛ na wonim sɛ wawu.
Afei Yesu de abeawa no papa ne ne maame, ne n’asomafo no baasa kaa ne ho kɔɔ ɔdan a abofra no da mu no mu. Osoo ne nsam kae sɛ: ‘Sɔre!’ Na onyanee, sɛnea wuhu wɔ ha no. Ɔsɔree na ofii ase nantewee! Ɛno nti na ne papa ne ne maame ani agye saa no.
Ɛnyɛ oyi ne onipa a odi kan a Yesu nyan no fii awufo mu. Nea odi kan a Bible ka ne ho asɛm ne okunafo bi a ɔte Nain kurom no babarima. Akyiri yi Yesu nyan Lasaro, Maria ne Marta nuabarima no, fii awufo mu. Bere a Yesu bedi tumi sɛ ɔhene a Onyankopɔn de no asi hɔ no, ɔbɛma nnipa pii a wɔawuwu asan aba nkwa mu bio. So eyi nyɛ anigye?
Abeawa a ɔwɔ mfonini no mu no papa ne hena, na dɛn na ama ɔne ne yere ahaw?
Dɛn na Yairo yɛe bere a ohuu Yesu no?
Dɛn na esii bere a Yesu rekɔ Yairo fie no, na nkra bɛn na Yairo nsa kae wɔ ɔkwan so?
Adɛn nti na nnipa a wɔwɔ Yairo fie no serew Yesu?
Bere a Yesu de n’asomafo baasa ne abeawa no papa ne ne maame kaa ne ho kɔɔ abeawa no dan mu no, dɛn na Yesu yɛe?
Hena bio na na Yesu anyan no afi awufo mu, na dɛn na eyi kyerɛ?
Kenkan Luka 8:40-56.
Ɔkwan bɛn so na Yesu daa ayamhyehye ne ntease adi kyerɛɛ ɔbea a na mogya retu no no, na dɛn na Kristofo mpanyimfo a wɔwɔ hɔ nnɛ betumi asua afi mu? (Luka 8:43, 44, 47, 48; Lev. 15:25-27; Mat. 9:12, 13; Kol. 3:12-14)
Kenkan Luka 7:11-17.
Adɛn nti na wɔn a wɔahwere wɔn adɔfo wɔ owu mu no betumi anya awerɛkyekye kɛse afi nea Yesu yɛ maa okunafo a ofi Nain no mu? (Luka 7:13; 2 Kor. 1:3, 4; Heb. 4:15)
Kenkan Yohane 11:17-44.
Ɔkwan bɛn so na Yesu daa no adi sɛ mfomso nni ho sɛ yebedi awerɛhow bere a yɛn dɔfo bi awu no? (Yoh. 11:33-36, 38; 2 Sam. 18:33; 19:1-4)